Discover Sailing Clinic (2015)
Myanmar Yachting Federation will be conducted the " Discover Sailing Clinic" on coming 12th, 13th & 19th, 20th September 2015 which program will be trained to be able to sail competently on your own, to know the various parts and functions of the sailboat etc.,
From this program, have the effective to know concerning with the techniques of sailing not only in written but also in practical. Please forward this out to your friends and pass along to anyone who would be interested.
မြန်မာနိုင်ငံရွက်လှေအဖွဲ. ချုပ်မှ Discover Sailing Clinic သင်တန်းအား စက်တင်ဘာလ ( ၁၂ ) ( ၁၃ ) ( ၁၉ ) ( ၂၀ ) ရက်နေ့များတွင် ရန်ကုန်ရွက်လှေအသင်း၌ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်၊၊ ရွက်လှေစီးခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာများ၊ ရွက်လှေတစ်စီးတွင်ပါဝင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများအား ကိုင်တွယ်အသုံးပြုပုံများ စသဖြင့် ရွက်လှေစီးခြင်း ဆိုင်ရာနည်းပညာများကို စာတွေ.လက်တွေ.သင်တန်းပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်၊၊